Ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory Coast I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Crystal Home Boy'. Ibali lethu le-Wilfried Zaha lokuBantwana kunye ne-Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubudlelwane beenyaniso, ubomi bentsapho kunye neeninzi ezininzi eziziwayo malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa bacinga i-Biography ye-Wilfried Zaha enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UDazet Wilfried Armel Zaha [Igama elipheleleyo] wazalwa ngomhla we-10th kaNovemba 1992 eAbidjan, eCôte d'Ivoire. Wazalelwa ngeCorpio.
UWilfried wazalelwa kuMnu noNksz Armel Zaha abavela eCôte d'Ivoire. Ngoxa wayeneminyaka emine ubudala, abazali bakhe bafumana ukunyuka kwemali okwabakhombisa ukuba bathuthele abantwana babo be-8 ukuya eUnited Kingdom. UZaha omncinci ngumntwana oza kuzalwa. Xa befuduka, bahlala eTrnton Heath e-London Borough yaseCroydon.
Ngaphambi kokufudukela eYurophu, u-Little Wilfried wayetyenziselwa ukudlala ibhola ngexesha elizweni lakubo, eCote d Ivoire. Waqhubeka nesimo esifanayo esikolweni sakhe saseLondon esondele kakhulu kwisikolo se-Crystal Palace.
Enyanisweni, uZaha wenyuka phantsi kwendlela esuka kwibala le-Crystal Palace yaseSelhurst Park, apho abazali bakhe bahlala khona emva kokufudukela eNgilani. Ingummelwane ophawulwe ngabantu abamnyama abachaza isizathu sokuba iqela lithatha abadlali abaninzi abamnyama.
Ngethuba esemncinci, uWilfried akaphambuki ekujongeni umdlalo we-Chelsea kwiTV. Wayetywala uDidier Drogba oye wafumana umdla wakhe wokuqala u-Chelsea ngokumelene neCallstal Palace eya kuyo. Ukugqibeleni ukubona umntu onelungelo lomhlaba onokubaluleka kakhulu kwinqanaba lenkulumbuso wakha inzondo entsha kuye. UWilfried wabona umnqweno obonisa iphupha lakhe lokuba ngumdlali webhola.
Ngoxhaswa nguYise Armel Zaha, uWilfried wajoyina isikhungo seCrystal Palace eneminyaka eyi-12. Kamva wabiza i-Palace kwi 2010, ngaloo ndlela wabancedisa ukuba babuyele kwi-Premier League.
NgoJanuwari 2013, uWilfried udluliselwe eManchester United ngenkokhelo yokuqala ye-£ 10 yezigidi. Enyanisweni, wayekho Alex Fergusongqibela phambi kokuthatha umhlalaphantsi.
UZaha wabuyela kwiNdlunkulu ngo-Agasti 2014 ngemali-mboleko eminyaka, ngaphambi kokuba abuyele kwiklabhu ngokusisigxina ngoFebruwari 2015. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Inyaniso iya kuxelwa. UWilfried Zaha ubhekene neengxaki zobudlelwane. Ukuqala, sinika ibali le-wag first waging. Ayikho enye KaDavid Moye intomba, Lauren.
Ngokutsho kweWILFRIED ZAHA: "Abantu bathi ndilala nayo Lauren. Andizange ndidibane naye! ".
David Moyes elalifudula iphenjelelwa umsindo nemifanekiso zombini Zaha kunye nentombi yakhe ULauren esililini baqhawula wakhululwa phezu internet.
Iimvumi zibonisa ukuba zombini badibana 'Ininzi yeentlanzi', inkonzo yokuthandana kwikhompyutha. Kwakhona, u-Lauren ngokukhawuleza waba isizathu sokuba uWilfried Zaha ashiye iCallstal Palace yeManchester United kwi-2013 nge-£ 15m. Ukuhlala kwakhe e-Old Trafford kwakungekho uvuyo ngamahemuhemu avela phakathi kwakhe noLauren Moyes. ULauren Moyes wayengu-19 kuphela ngelo xesha. Usuke ukususa i-akhawunti yakhe ye-twitter ngenxa yezimangalo ezimbi. Ngezantsi ukhangeleke kakhulu.
Amathuba okuqala eqela lokudlala kunye ne-United ayedluliselwe ku-Zaha, sonke sibulela kwisijeziso esivela kuDavid Moyes ovakalelwa kukuba ungciniwe. Nangona kunjalo, uWilfried Zaha wayelokhu ekhanyela ibango njengoko wayibiza 'Ukuhlambalaza iindlebe'.
Nangona le nto ibonakala ifile, abeendaba baqhubeka bemhlasela. Eli xesha, lixhalabisa unyana wakhe ayenayo intombi yakhe enhle kakhulu yaseIvory, uLavvena Valentino. Bobabini badibana eCôte d'Ivoire ngelixa uWilfried Zaha ebengumntwana ozingelayo kumama waseCôte d'Ivoire.
Intombi enhle yase-Ivory Coast, uWilfried Zaha, uLavena Valentino
ULavena Valentino u krokrelwa ukuba ngumama kaZaha unyana. Ekuhlaseleni ukuhlaselwa kweendaba zoluntu, ithetha Unyana kaWilfried Zaha ubonakala ngathi ufumene nje uDavid Moyes ungumzukulwana wakhe.
Unyana kaWilfried Zaha kuthiwa nguDavid Moyes umzukulu
Unyana kaWilfried Zaha ukhangeleka ngokumangalisayo kwaye ukhula ngokukhawuleza kwisithombe esingezantsi.
Unyana kaWilfried Zaha
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -IScandal
UWilfried Zaha uphinde wamtyholwa ngokukhohlisa intombi yakhe. Eli xesha, kuthiwa wathabatha intombi yomnye umdlali webhola. Ungumfundi ogama linguPaige Bannister. Njengoko ngexesha lokubhala, uPaige usekupheleni kwayo kwi-degree degree management business kwiYunivesithi yaseWestminster.
UZaha wayefanekisiwe eshiya iholo lakhe yokuhlala eWembley kunye nomfundi uPaige Bannister owaziwayo ekuzifundeni esikolweni waba nobukhulu obukhulu ngenxa yobudlelwane bakhe noZaha.
Enyanisweni, uZaha uyazi ukuba uyathandana noM Wolves umkhuseli uKortney Hause owake wabonisa iNgilani kwi-Under-21 level. Xa utshilo wathi."Andikhathalele". Bobabini baye bachitha iiveki ezininzi eMorocco naseDairobi. UPaige uye watshela uZaha malunga nolwalamano lwakhe noKortney, kwaye iingxelo zibonisile ukuba akazange azibethe ijwabu leso.
Umhlobo kaPaige wathi: "U-Paige uvelisa into yokuba unamakhwenkwe aphezulu. Ngokuqinisekileyo uyabakho kwiimali zakhe. UPaige kunye nesoka lakhe uKortney Hause baye bebonke ndawonye, ​​kodwa ugawula ukuba uZaha ungumdlali weNkulumbuso weLizwe kwaye ucebile. Ngaphandle kokungathandabuzeki, uZaha uwele ePaige ngendlela enkulu. Umxelele ukuba uya kumshiya intombi yakhe kodwa kunzima okwangoku.
Isithomi esingezantsi sibonisa uZaha noPaige beshiye iholo lokuhlala esikolweni. UZaha uhamba emva kwePaige ngesizathu esihle sokuba ufanele wazi.
UZaha uhamba emva kwePaige ngesizathu esihle
Xa utyelela, u-Zaha uhlala ehamba ngeP £ 110,000 emnyama iMercedes G-Wagon kufuphi neeholo labafundi bakhe zokuhlala eWembley. Ngaphantsi kwe Paige njengoko engena emotweni kaZaha emva kokushiya iholo yakhe yokuhlala kunye nomdlali webhola lebhola.
Njengoko ulayishe i-snaps eshushu, uPaige uye wabhala ngezithombe ngokuzenzekelayo izipho ezizithengayo ezivela kuZaha, kuquka nabaqeqeshi be-£ 1,500, i-£ 3,000 Givenchy-bag-bag bag kunye ne-£ 4,000 Louis Vuitton isikhwama.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -usapho
Ukuqala, siya ngqo kumnye umzalwana wakhe omdala odla ngokufumana izihloko ngenxa yezizathu ezingalunganga. U-Herve Zaha AKA Zeltor uyaziwa ngokuba ngumfundisi we-DSN.
I-Herve Zaha yaziwa ngokuba yiyo 'Jikelele' kwiqela lemigxuma emva komtya wezobugonyamelo eLondon. Kwake wachaza ukuba uyinkokeli yodumo olubizwa ngokuba yiDNN 'Ungathethi nto'. Le ngqungquthela sele ijongene nokubetha, ukudubula kunye nokuphanga ngaphesheya kweLondon ukususela kwi-2007.
Ukusebenzisa igama legagli uZeltor, uHerve Zaha wabhala kwiphepha lakhe lephrofayela yeBebo kwi2009: "Zonke iil aluminium ehlanganiswe udumo lwezinye iintlanga, uyazi ukuba ungubani, ufumane okwenene. nqanaba litshintshile. Iqela lam liwenza umsebenzi walo. Awunqweneli ukubona ubushushu bam, xa uyenzayo, umzimba wakho uya efrijini ukuze ushitshise ".
Yakhe DSN 'Ungathethi nto' Ibhola laqala ukuhlawula ii-headline kwi-2007 xa babandakanyeka kwimfazwe enobudlova kunye negundane elibambisanayo kwi-shopping center eCroydon. Iigundane zazixhaphaza iimbumba kunye neebhola zebhola ebusweni. Oku kwashiya omnye umhlobo kaZaha wobuntongo efile.
Umngane kaZaha wobuntwa wabulawa ngokuxhatshazwa kwamagqirha
U-Herve Zaha AKA Zeltor wade wathola inkunkuma ye-12 yenyanga enomonakalo olwaphulo-mthetho ngoJulayi 2012 emva kokuphosa i-paving slab ngefestile yemoto ngelixa umqhubi wesibini ehleli evili. Walawulwa ukuba ahlawule i-£ 280 kwimbuyekezo kunye neendleko zeenkundla. I-Asides, ibanjelwe kwaye ibhalwa ngamanye amaxesha.
Akukho sikhokelo kuyo yonke into yokuba u-Wilfried umntakwabo wakhe wayekade ebandakanyeka kwiqela lemigundane. UWilfried Zaha wenze kakuhle ukuba ahlale kuyo yonke imfazwe yamaqela xa ekhula.
UWilfried Zaha unomdla kakhulu kubazali bakhe. Wakhe wathenga unina, imoto kunye noyise indlu. Ngokufanelekileyo, ubelana ngeshumi kwipesenti yomvuzo wakhe kwintlalontle yabo bonke abathandayo kuquka nentando. Ngokubhekiselele ekuthandweni, uZaha uhlala ehlala esweleyo (ekhaya nakwamanye amazwe) kwaye uhlawulela nokunyaniseka kwiimfesane zamakhelwane ezihlala zifuna iindawo zokuhlala. Ngokufanelekileyo, uye wanceda abaninzi abahlobo bakhe beenkwenkwezi zabantwana beenkwenkwezi bavula ikhefu elitsha.
Kumele ukuba kunzima kakhulu ukuba uWilfried Zaha akhulele endlwini kunye nabantwana abathandathu abathandana naye xa esemncinci. UWilfried Zaha unabantakwabo abane noodade abathathu. Uyabonisa ukuba uyise wayesebenza ngokuphumelelayo kwimpumelelo yakhe. Njengokugqibela ekuzalweni kunye nomntwana wendlu, wayehlala ekhuselekile ekuhlanganiseni neengxabano ezimbi ngokungafani nomntakwabo omkhulu, u-Herve Zaha owabizwa ngokuba engalawulekiyo.
Enyanisweni, iNkundla yeCallstal Palace (Selhurst Park) eyayingaphandle kwendlu yayo yamsindisa. Ngezantsi kukho umboniso wecala. Mhlawumbi, unokucinga nje ukuba ikhaya lentsapho likaWilfried Zaha lini.
Umboniso we-Crystal Palace Stadium (Selhurst Park)
Ngethuba lobuncinci bakhe, ngokukodwa xa efika eNgilani kwiminyaka eyi-4, intsapho yakhe yayizibuza ukuba yintoni eyenzekayo xa izigulana zamanzi ziza kumdlalo webusuku.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Money Spender
Uthiwa uchitha phakathi kwe-£ 6,000 ukuya kwi-£ 10,000 kuma-nightclubs e-night imali kunye nesikhungo semali. Bonke abaxhasi bavuma ukuba ufumana unyango lweenkwenkwezi ngenxa yokuxhaphazwa kwakhe. Indawo ekhethekileyo ngaphakathi kwinqanaba le-VIP lebala lokuzonwabisa kuthiwa yindawo yokugcina isigxina kuWilfried Zaha kunye nabahlobo kunye nosapho.
UWilfried Zaha, umthengi omkhulu wemali kwi-bar
Ngaloo nto, uWilfried Zaha akahlali kummandla Feb xa kuziwa ekusebenzeni kwimivalo, kodwa ufunda ngokukhawuleza.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Gilmore Shorts
U-Wilfried Zaha ufune ukwaneliseka kwimidlalo yakhe yangaphantsi. Uye wenza isivumelwano sokuvumela ukuba sibe ubuso (kunye ne-groin) ye-Gilmore Compression Shorts.
Yadalwa ngu-Harley Street ugqirha ogama linguOJA Gilmore, oyingcali yecala lokulimala, ingubo yokunyanzela "Zenzululwazi eziklanyelwe ukuqinisekisa ukuxhaswa kwe-groin, i-hamstring kunye neendawo zokudumisa."
Ungabona kwakhona ukuba unesici esicacileyo kunye nesigqirha esichazelayo esinika amahle "I-Pubic Symphysis" (oko kukuthi "wang") Inkxaso kwinkqubo yesilisa.
"Ndiyambatha i-Gilmore Support Shorts ukuqeqesha imihla ngemihla njengenxalenye yebhagi yam ibhokisi efunekayo - iyingqayizivele," UZhaha uthe.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -inkolo
UZaha wambi wathi abazali bakhe babemdonsele ecaweni ngoxa wayeseyingane.
Ngokufanelekileyo, uWilfried Zaha wayezithiyile ukuba enze ecaweni njengengane, kodwa uyavuya kubazali bakhe bakwenza oko kuba ngoku uthandaza lonke ixesha.
Akayithandazi ngexesha elibi xa efuna uncedo kodwa nakwizinto ezilungileyo. Ngamazwi akhe ...
"Ndiyathandazela yonke into ngokwenene," uthe. "Ndivakalelwa kukuba yonke into eyenzekayo ngesizathu kwaye ufanele uhlale ukhaliphe ngengqondo ngoko ndigcina nje ukholo lwam kwaye ndithandazele. Ukuba ndihamba kwisiqhelo esibi ndiyazi ukuba kuya kuba ngcono. Ngendlela efanayo uthandaza ngexesha elibi, ngendlela efanayo kufuneka uthandaze ngexesha elihle. Kuba ngokucacileyo ngexesha elibi ucela uThixo oku kwaye oko kwaye xa ekunika zonke iintsikelelo okanye nantoni na, uyakhohlwa ukuthandaza. Ngoko ndiyathandaza ukususela malunga neeneminyaka ezisibhozo, ezithoba. Ngaloo nto ubudala, Abazali bam besetyenziselwa ukuba bandidonsa kwicawa nokuba ngaba ndiyifunayo okanye ayiyi. Kodwa ke kwangena kwisiqhelo apho ndandithandaza ngaso sonke isikhathi kwaye ndandisenza nje. Emva kokucaphukisa xa ndivuswa kakhulu ngeCawa ngeveki kunye nokuba ndandigqoke ngethuba ukuya ecaweni, ndandicinga ukuba: 'Uyazi ntoni? Ndingumntu ofana nale. Ndiyakholwa kuThixo.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukuphazamisa iT Fan
UWilfried Zaha wancenga lo mntu.
Umdlali weNewcastle weParagraph uPeter Beardsley, ngoku uhlalutye kwicala laseGeordie, wada wahamba waya eLondon ukujonga u-Zaha elwa neBirmingham. Kuphela ukuba athole ukuba wayemisiwe.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukutshintsha Ukunyaniseka
Ngomhla wama-27 kweyeNkanga yowama-2016, i-Ivoryan Soccer Federation yaqinisekisa ukuba uZahha wayethumele imbalelwano kwiFIFA ukuyokutshintsha ukuthembeka kwebhola ekhatywayo kwi-England ukuya e-Ivory Coast. Ukuphendula kolu phuhliso, uGareth Southgate ubonise ukuba angazama ukumphelisa uZaha ekutshintsheni ukunyaniseka ngenxa yeqela lakhe leklabhu. Ngelishwa, i-England yamphulukana ne-Ivory Coast.
UZaha wabizwa ngeqela le-Ivory Coast kwi-2017 Africa Cup of Nations. Wenza intando yakhe ngokumelene neSweden ebusweni, ekhutshwe ngexeshana, encedisayo Giovanni SioInjongo yokuphumelela kwe-2-1.
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -I-Zodiac Trait
UWilfried Zaha u-Scorpio kwaye unezi zinto ezilandelayo kubuntu bakhe;
Amandla kaWilfried Zaha: Unobulumko, unesibindi, unomdla, unenkani kunye nomhlobo wenene.
Ubuthathaka bukaWilfried Zaha: Akayi kuba nethemba, umona, ufihlakele kwaye unobundlobongela.
Yintoni uWilfried Zaha ayithandayo: Uthanda inyaniso, inyaniso, ilungile, abahlobo abaselula, ukukloloda kunye nokuthanda okukhulu.
Yintoni uWilfried Zaha ayithandiyo: Akayithandi ukungathembeki, ukutyhila iimfihlelo kunye nabantu abanomdla
Siyabonga ngokufunda iWalfried Zaha yabantwana bebali kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!
I-Cote d'Ivoire yeDlalo
Indaba kaDaniel James Childhood Plus Untold Biography Facts
I-Ainsley Maitland-Niles Ibali leBantwana kunye neNgxelo engeyiyo ye-Biography Facts
URob ophethe iNdaba yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-Marouane Fellaini Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts